Uyenza njani imemes yakho ye-Intanethi ngendlela elula kakhulu | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Funda ukwenza iimemes zakho kwaye wabelane ngazo Internet ukufikelela kwizigidi zabasebenzisi ngomxholo wakho. Iimpawu zasihlasela Ukusuka kumzuzu wokuqala beza kwinethiwekhi ngokuba: bangakhathali, bayile, bangabokuqala kwaye bahlala benento ukuchukumisa uburharha efumana wonke umntu oyibonayo ukuba abelane ngayo kwaye abe legciwane ngothungelwano, ngokungathandabuzekiyo sisiganeko kwimbali ye-Intanethi.
Sisoloko sibabona kwiinethiwekhi zentlalo kodwa ... Ngaba siyayazi indlela yokwenza meme? Loluphi uhlobo loonobumba abalusebenzisayo? Ngaphandle kwamathandabuzo, sonke singathanda ukufunda ukwenza ii-memes ukuze sizokwabelana ngazo kwinethiwekhi nabahlobo bethu. Funda indlela yokwenza i-meme ngokuzenzekelayo ngokusebenzisa i-intanethi meme generator okanye usebenzisa i-Photoshop.
I-meme ayikho enye into ngaphandle komfanekiso (ukufota, umzekeliso, ividiyo ... njl esebenza njengendlela yokuhambisa umyalezo we-meme ngaloo ndlela uphucula umbono womfanekiso. Ukuba sijonga ii-memes ze-Intanethi siyakuqonda ukuba zihlala zikhona ilula: umfanekiso kunye nombhalo ngaphezulu. Ngokubanzi isicatshulwa sihlala simhlophe nge tugqatso olumnyama ngaphandle, nangona sinokufumana okwahlukileyo okwahlukileyo.
Inkqubo yokuqala esiza kuyibona yenza meme Kungenxa ye- meme umvelisi intanethi oko kuyasivumela yenza meme ngokuzenzekelayo. Kule webhusayithi sinokwenza iimemes zethu ngokufaka umfanekiso wethu okanye ukusebenzisa ikhathalogu yememes evela kwiwebhusayithi uqobo.
Nje ukuba senze i-meme, iphepha lisivumela ukuba siligcine kwifomathi yomfanekiso okanye silikope kwikhonkco lewebhu.
Con Photoshop Kuyenzeka ukuba senze ezethu iimemesSiza kuba nakho ukwenza izinto ezininzi ngakumbi kuba, njengoko sisazi kakuhle, le nkqubo isetyenziselwa zonke iintlobo zeefotomontages kunye nokubuyiselwa kwedijithali, ke ngoko i-meme elula ayinangxaki kuye.
Sivula umfanekiso kwi Photoshop kwaye senza umxholo we meme yethu. I-typography esetyenzisiweyo ye-memes yi-IMPATC ezimhlophe ngombala omnyama ngaphandle.
ukuba yongeza ukubetha okumnyama into ekufuneka siyenzile kukucofa kwiqhosha lasekunene lempuku kulwahlulo lokubhaliweyo kwaye ukhethe ukudibanisa ukhetho, emva koko sijonge ukhetho lokubetha.
Sele unayo yonke into oyifunayo ukwenza ii-meme kwaye ubashiye bekhululekile kumnatha ukuze baye kwintsholongwane. Ukwenza meme akunzima, konke okudingayo kukuba nombono omkhulu onokuba nomtsalane kuwo wonke umntu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Uyenza njani imeme yakho ye-Intanethi ngokulula
UAlejandro Farfán sitsho
UTania Carrasco xa ungekho, hahaha
Phendula u-Alejandro Farfán